waxyaabaha OEM kiiska phone dhar cusub ee Iphone taxane mobile
kiiska phone PET double IML
kiiska phone dhar IML
pc adag IML + kiiska phone go'ay tpu
kiiska phone maqaar IML
kiiska phone PC IML
kiiska phone IML TPU
technology New IMD Shiinaha electroplated ph caadadii OEM ...
waxyaabaha cusub OEM kiiska phone dhar for mobile Iphone ...
kiiska telefoonka Mobile for iphone 7 kiiska slider iyo 7 plu ...
IMD electroplated kiiska phone tpu + pc midabo for Iph ...
tpu OEM shell- telefoonka gacanta
aragba xirfadeed oo ifaysa kiiska telefoonka mobile waayo, waxaan ...
Description Product IML iyo Feature:
Waxyaabaha: film PET + TPU, PC, PC + ABS
IML garasho kartaa noocyo badan oo technology, Color la bedeli karaa more fudud in mid ka mid ah si ay.
qalabka oo dhan waa dejinta ka Bayer Germany.
technology IML leeyahay iska caabin ah saamaynta fiican.
Qaabka gudaha kiiska phone hayn karaa waqti dheer marna ku baxayn.
doorashada technology More kiiska phone. Waayo, dhar, maqaar, baasaboorka, alwaax, awood flash, iwm
OEM iyo ODM waxaa laga heli karaa nala.
Maxaad noo dooran:
1.10years saaraha technology IML. Waxaan leenahay R & D waaxda u fiican. Waxaan ka dhigi kartaa caaryada sidaad u baahan yahay.
2.More qiimaha wershed tartan si loo hubiyo in faa'iidada iibsadaha ee.
3.Professional XPIEIV & QA waaxda hubin karaa in waqtiga dhalmada gaaban iyo gacanta adag tayada alaabooyinka.
waaxda 4.Complete ka Samaynta caaryada in xirxirida. All of tallaabo noqon doono dhamaystirka madax banaan by our warshad.
tayada 1.High: PIC kasta noqon doonaa noqotay labanlaab adag baadho.
waqtiga dhalmada 2.Best: ku noqon doonaa gacanta by our saaraha si buuxda u
qiimaha 3.Competitive: qiimaha oo dhan noqon doono sarkaalka, xukumi waaxda injineernimada.
design 4.OEM: 10years aragnimo OEM & ODM saaraha
HXS Ltd, IML / hogaamiyaha saaridda technology IMD!
Shenzhen HXS technology Ltd, la aasaasay 2009, waa soo saaraha xirfadle in ay diiradda saaraan alaabta technology IML. waxyaabaha Our daboolayaa aagga weyn oo ay ku jirto kiis IML phone, guddi phone IML, IML guddi waxyaabaha digital, guriga IML qalabka guddi, guddi qalabka caafimaadka, iwm.
Shirkadda daboolayaa 3000 mitir oo laba jibbaaran deegaanka, waxa uu ku yaalaa Henggang Town, Degmada Longgang ee Shenzhen City, Shiinaha. Near by tareenka dhulka hoostiisa Liuyue. gaadiid ku haboon waa wanaagsan loogu talagalay macaamiisha si ay u soo booqo warshad. Our warshad buuxin kartaa habka farsamada oo dhan la waxyaabaha our madax banaan. wax soo saarka The dar waaxda wax taaj oo kale, waaxda daabacaadda, waaxda la xirrira, waaxda duro, shaqaalaha department.our kormeer ku dhawaad ​​300 oo qof. Waxa kale oo uu leeyahay maamulka sii wanaagsan iyo talanti farsamo.
Hadda waxaan u noqday shirkado badan oo caan ah lammaane iskaashiga mudada dheer, noocan oo kale ah sida LG, OPPO, BYD, INCASE, TTPOD, LAWA, Kate Spade, iwm.
"Bixi tayada ugu wanaagsan iyo wax soo saarka hal abuur leh macaamiishayada" waa bartilmaameedka ugu weyn oo weli ku adkaysanayaan in la sameeyo time.Welcome oo dhan si ay u soo booqo warshad ka dhigi iskaashiga dheer iyo guul guul mustaqbalka.
Waa maxay IML?
IML (In-Qaab Label) waa technology kiiska phone cusub in daabacaadda hannaankii on film PET si isku duro.
IML waa edition jidiidin IMD ah (In-Qaab Qurxinta)
Ma waxaad tahay shirkad soo saaraha ama ganacsi ah?
Waxaan nahay soo saaraha xirfadeed IML in ay diiradda saaraan technology IML 10 sano waayo-aragnimo. Laga soo bilaabo wax taaj oo kale in Daabacaadda, Samaynta, duritaanka, Inspection, xirxirida. Dhammaan tallaabooyinka uu noqon doono complete by our soo saaraha.
Maxay yihiin hadalladan aad u soo?
Waxaan nahay ugu weyn ee ay soo saaraan wax soo saarka taxane IML. Ay ka mid yihiin kiiska IML phone, guddi phone IML, guddi digital IML, watch smart guddi bangi awood panel.IML IML, guddi mashiinka dharka lagu dhaqo IML, IML guddi makiinadda korontada, iwm
ku siin kara adeeg OEM ah?
Waxaan nahay soo saaraha OEM xirfadeed muddo toban sanadood ah in industry technology IML.
Fadlan u soo dir aad file sawir design shuruud nala in la sameeyo caaryada kuu.
Sida aynu ka heli kartaa tijaabada?
Waayo-baarka hadda xor ah u noqon doono macmiilka iyo shuruud baarka daabacaadda our baahan doontaa inaad bixiso.
Sidee ku saabsan waqtiga dhalmada aad?
2-3days waayo-baarka iyo 3-5days amarka. Xamuulka waxaa ka weyn wuxuu noqon doonaa si waafaqsan tiro.
Min.Order Tirada: 3000 Piece / Cadad
Supply Kartida: 10000 Piece maalin kasta
Shuruudaha Payment: T / T PayPal
taam fiican ee aad telefoonka
Wax ku ool ah looga hortago Carro iyo xagashada, shockproof
Fiiro gaar ah: aalad aan loo baahnayn loogu rakibo, kaliya dhaqso ah telefoonka
Ku rid taageero markab !! taageero Daad-dhimis weyn
Kor 5 burburinayay waa prefered, oo ay heli doonaan sida ugu badan 5% off!
Previous: imaanshaha cusub caaryada gaarka ah kiiska phone maqaar OEM for taxane Iphone
Next: technology New IMD Shiinaha OEM electroplated kiiska phone caadadii qeybiyaha
Best Case Phone Mobile
Case phone Cell
Shiinaha Phone Case 8 Plus
Case Fabric Phone
Iml Case Phone
Iphone 8 Phone Shirkado Case
Iphone Phone Case 8
Iphone8 Case Phone
ODM Mobile Case Phone
OEM Mobile Case Phone
kiiska telefoonka Mobile for iphone 7 kiiska slider iyo ...
OEM aragba Wehliyaha tpu budada cover telefoonka gacanta
mobile IMD xirfadeed cad phone go'ay tpu ...